Bir la Mood - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Bir la mood)
Bir la Mood (ingiriis: Metaloid) waa curiye kimiko kuwaas oo leh calaamado iyo astaamo u dhexeeya birta iyo bir ma aheha, taas ooy aad u adag tahay in la kala saaro ineey bir tahay iyo ineey bir ma ahe tahay.
In kastoo barashada Kimisteriga ay ku jirto Bir la moodku, ma jiraan nimaad u gaar ah oo lagu qeexi karo curiyeyaashan.
Lixda curiye ee loo aqoonsadey bir la moodka waa: Booron (B),Silikoon (Si), Jermaaniyaam (Ge), Aarsenik (As), Antimony (Sb), iyo Teluriyaam (Te). Sidoo kale waxaa jira tiro dhowr ah oo ayagana lagu daro liiska Bir la Moodka, waxaana ka mid ah: Kaarboon (C),Alumiiniyaam (Al), Seleniyaam (Se), Boloniyaam (Po) iyo Astantiin (At).
Sida caadiga ah, curiyeha Bir la Moodka ahi wuxuu leeyahay muuqaalka birta oo kale, laakiin waa adke si fudud loo kala jabin karo, halka birta aanan sahal lagu kala jabin karin. Waxaa intaas dheer, curiyaha bir la moodka waa mid kulka iyo korontada si daciif ah u gudbiya ama aanan gudbinin gebi ahaanba.
Si kastaba ha ahaatee, curiyeyaashan waxaa laga samayn karaa isku dhisyo tayo fiican oo jaandi ah, quruurado ama dhalooyin, olol difaace, iyo badh-gudbiye dabka iyo korontada.
Curiyaha Bir La Moodka
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bir_la_Mood&oldid=142405"
Last edited on 28 May 2015, at 12:56
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 12:56.